2020 | 2020 |
July 8, 2020 July 10, 2020 Uncategorized
Indoor Generation တစ်နေ့ ကျတော်အမေနဲ့စကားပြောဖြစ်ရင်း အမေကသူ့ငယ်ဘ၀အကြောင်းဆီ စကားလမ်းကြောင်းဉီးတည်သွားတယ်။အမေက သူ့ငယ်ဘ၀မှာ ဘယ်လိုတွေဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်ဆိုတာ ပြောပြတယ်။အဲ့ထဲက အမေ‌ပြောပြတဲ့ သူကလေးဘ၀က သူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဘယ်လိုဆော့ခဲ့တာ ဘာကစားနည်းတွေကစားခဲ့တာလို့ ပြောတဲံချိန်မှာ ကျတော့ခေါင်းထဲမှာ အတွေးတခု၀င်လာခဲ့တယ်။အဲ့တာကတော့ကျတော့ကလေးဘ၀ အကြောင်းပါ၊၊ ပြန်စဉ်းစားမိတော့ ကျတော်ငယ်ငယ်က ကလေးဘ၀အကြောင်း သတိရမိတယ်။ဒါပေမယ့် အမေပြောပြတဲ့ သူ့ငယ်ဘ၀လောက် ပျော်စရာမကောင်းခဲ့တာကတော့ အမှန်ပါဘဲ။ဘာလို့လဲဆိုပြီး ပြန်စဉ်းစားတော့ ကျတော်တို့ငယ်ဘ၀မှာ Game ဆိုင်တွေပေါ်လာတယ်။တီဗီတွေ ခေတ်စားလာတယ်။အဲ့မှာဘဲ ကျတော့အချိန်အတော်များများ ကုန်ဖြစ်ခဲ့တယ်။တခြားကလေးတွေလို ပြေးလွှားဆော့ကစားတာနည်းခဲ့တယ်။ အိမ်တွင်းအောင်းနေခဲ့တဲ့ အချိန်ကများတယ်ဆိုပါတော့။ ကျတော်ဟာ အဲ့အချိန်ကတခြားကလေးတွေလောက်မသန်မာခဲ့သလို ခဏခဏလည်း ဆေးခန်းတွေသွားပြရလို့ Read More
June 16, 2020 June 16, 2020 Uncategorized
အိမ်ထဲမှာနေရတဲ့အချိန်တွေအရမ်းကြာမြင့်ခဲ့ရပါတယ် ခရီးသွားရတာကို တောင်းတခဲ့တာအချိန်တစ်ခုရှိနေပါပြီ။ ပုံမှန်ခရီးသွားနေကျဖြစ်တဲ့သူတွေအတွက်ဆို ၃လလောက် ဘယ်မှမသွားရရင် နေမကောင်းချင်သလို အစားမစားချင်သလိုဖြစ်နေတော့တာပဲ။ အိမ်နဲ့ အလုပ်နဲ့ G&G လောက်သာ အများဆုံးသွားဖြစ်နေတော့ တော်တော်ကိုပျင်းစရာကောင်းတာပါ။ အဲ့လိုအချိန်မှာ တိုက်ဆိုင်တာလား ကံကောင်းတာလား မသိလောက်အောင် Back To Nature Myanmar က စီစဉ်တဲ့ ရန်ကုန်နဲ့ အနီးအနား ခရီးတွေကို Facebook Page မှာတွေ့လိုက်ရတော့ အတိုင်းမသိ ဝမ်းသာမိခဲ့ပါတယ်။ တစ်ခုတော့ စိတ်ပူမိပါတယ် ကျန်းမာရေးအတွက် စိတ်ချရပါ့မလားလို့ ဒါပေမယ့် အရင်ဆုံး ပိုစ့်ကိုဖတ်လိုက်တော့ ၁၄ယောက်စီးကားကို Read More
March 25, 2020 March 25, 2020 Uncategorized
ကျတော်ကတော့ camping သွားရတာကြိုက်တဲ့သူပီပီ အားလပ်ရက်ရတာနဲ့ ရန်ကုန်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ပဲခူး၊ပြင်ဦးလွင်စတဲ့နေရာတွေကို camping သွားလေ့ရှိတယ်။တယောက်တည်းဘဲဖြစ်ဖြစ် မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းနဲ့ဘဲဖြစ်ဖြစ်သွားလိုက်တာပါပဲ။ အများအားဖြင့်တော့ အဖွဲ့နဲ့ပဲသွားဖြစ်ပါတယ်။ ခရီးသွားအေဂျင်စီတွေနဲ့ချိတ်ပြီးသွားတာမျိုးပေါ့ တခါတေလေတာ့ ကိုယ်တိုင်ဘဲ တယောက်တည်း သွားတဲ့ camping တွေလည်းရှိတာပေါ့၊ ကျတော်ကတော့ဒီနေ့ camping သွားတဲ့အတွေ့အကြုံလေးကို ပြန်ပြီး ဝေမျှပေးချင်တယ်ဗျာ ။ အဲ့တာကတော့ Back To Nature Myanmar နဲ့ ဆက်သွယ်ပြီးသွားခဲ့တဲ့ Camping လေးပေါ့။ကျွန်တော်က outdoors ခရီးသွားရတာ ကြိုက်တဲ့သူဆိုတော့ ခရီးသွားရင် လိုတာလေးတွေအတွက် မြို့ထဲကို shopping Read More
March 21, 2020 March 21, 2020 Uncategorized
သင်ဟာ သင့်ရဲ့အချိန်တွေကို outdoors မှာဘဲ သုံးစွဲချင်တယ့်သူဆိုရင် Outdoors နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ Rules တွေကိုသိထားဖို့လည်းလိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်း Outdoors ထွက်လို့ကောင်းတဲ့နေရာတွေအတော်များများရှိတဲ့အတွက် သင့်အနေနဲ့အားလပ်ချိန်တွေမှာ Outdoors ထွက်ဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာသစ်တော့တွေဟာ ထိန်းသိမ်းဖို့လိုအပ်နေသလို၊တောရိုင်းတရစ္ဆာန်တွေဟာလည်း ထိန်းသိမ်းဖို့အတော်လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သင့်အနေနဲ့ Outdoors ခရီးထွက်တဲ့သူဆိုရင် ဒီစာကနေတဆင့် သင်သွားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို တတ်နိုင်သမျှထိန်းသိမ်းဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေ။ Outdoors သမားတွေဆိုရင်ဒီစကားလုံးဟာရင်းနှီးနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ Leave No Trace ဆိုတဲ့စကားဘဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ Outdoors ထွက်တဲ့သူတွေအနေနဲ့လိုက်နာသင့်တဲ့ အချက်7ချက်ပါတဲ့ စည်းကမ်းတခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ၁။ အစီအစဉ်ဆွဲပါ။ ‌ဘယ်ခရီးမဆို မသွားခင်တော့ ပြင်ဆင်ရမှာပါဘဲ ။ Read More
Forests covered about 20 percent of the total land mass of the earth. Not long-ago Myanmar’s rain forests used to be one of the largest terrestrial biomes on earth. Commonly known as the Burmese Tropical Rainforest, used to be the Read More
Outdoor ခရီးသွားမယ်ဆို safe ဖြစ်အောင်လိုက်နာရမည့် အချက်(၅)ချက်
March 17, 2020 March 21, 2020 Uncategorized
Outdoor ခရီးသွားတဲ့အခါ သင့်အနေနဲ့မလုပ်မဖြစ်လုပ်ရမယ့်အဓိကအချက်တွေရှိနေပါတယ်။ ဒါတွေကတော့ ခရီးမှာလုံခြုံမှုရှိအောင်ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတာတွေဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအနေနဲ့အချက် ၅ ချက်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ။ 1 အဆက်အသွယ်ရှိအောင်လုပ်ပါ။ သင်ဟာခရီးသွားနေရင်းနဲ့ လမ်းပျောက်နေတာမျိုး ၊ဒဏ်ရာရပြီး ခရီးဆက်မသွားနိုင်တဲဘအခြေအနေတွေမှာ သင်ဒုက္ခတွေ့နေပြီဆိုတာကို သင့်မိသားစုဝင်တဦးဦး သို့ သင့်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းထဲက သင်စိတ်ချယုံကြည်ရမဲ့သူတဦးဦးကို အရေးပေါ်ဋ္ဌာနများရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကို ပေးထားခဲ့ပါ။ ကြက်ခြေနီ ၊ ရဲစခန်း၊ လူမှူကယ်ဆယ်ရေး စတဲ့ ဋ္ဌာနတွေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကို ပေးထားပါ။ဒါဆို တကယ်လို့သင်ဟာ ပြန်ရောက်ရမယ့်ချိန် မရောက်ရင် သင့်ကို ရှာဖွေဖို့အတွက် ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေဆီ သင့်ယုံကြည်ရတဲ့ သူငယ်ချင်း or သင့်မိသားစုဝင်တဦးဦးမှ Read More
Camping သွားရင် လိုအပ်မည့် အဓိက ပစ္စည်း (၉)မျိုး
March 13, 2020 March 21, 2020 Uncategorized
ကျတော်တို့တွေ Campingခရီးတွေထွက်တဲ့အခါ တချို့တွေက camping မှာညအိပ်ကြရမယ်ဆိုပြီး အဝတ်အစားတွေတပုံကြီးယူလာတာမျိုး၊ မလိုအပ်ဘဲ အစားအသောက်တွေတပုံတပင်ကြီးယူလာတာမျိုးတွေ ၊ တကယ့်အရေးကြီးတယ့် Water Bottle တွေ ကျန်ခဲ့တာမျိုး စတဲ့မဖြစ်သင့်တဲ့အမှားတွေ မလိုအပ်တဲ့အပိုပစ္စည်းတွေကြောင့် Camping အရသာကို အပြည့်အဝမခံစားရဘဲ ခရီးစဉ်ပြီးဆုံးသွားတာ ကျတော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ခဏခဏကြားဖူးကြမှာပါ။ ဒီလိုမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ဆိုရင်တော့ မသွားခင်မှာ သေချာစီစဉ်ဖို့လိုပါတယ်။အရင် Camping သွားဖူးတဲ့သူတွေဆီကနေအတွေ့အကြုံတွေမေးပြီး ဘာတွေကိုတော့ ယူသွားဖို့အရေးကြီးတယ်၊ ဘယ်ဟာတွေကတော့ မလိုအပ်ဘူး စတာတွေကို မေးမြန်းဖို့လိုပါတယ်။ ဒီခေတ်မှာတော့ Travel Blogger တွေ Review ရေးတာတော်တော်ကိုခေတ်စားလာပါတယ်။ဒါ့အပြင် Read More
March 10, 2020 March 21, 2020 Uncategorized#backtonaturemyanar
ကျနော် သိရသလောက် ဆိုရင် လူမှာ ပြောင်းလဲမှုကို ကြိုက်တဲ့သူ မကြိုက်တဲ့သူဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိတယ် ပြောင်းလဲမှုကို နှစ်သက်တာ မှားလားမှန်လား ကျနော်မသိပါဘူး ပြောင်းလဲမှုကို လုံးဝမနှစ်သက်တဲ့သူကိုလဲ မှားတယ်မှန်တယ်ပြောလို့မရပါဘူး ဘာလို့လဲဆိုတော့ အရာအားလုံးမှာ ဘယ်တော့မှ အမှန်တရားဆိုတာ မရှိပါဘူး ဖြစ်ပျက်လာတဲ့ အရာတွေအပေါ် ဘယ်လိုကြည့်လဲ ဘယ်လိုမြင်လဲ ဆိုတာ အပေါ်မှာ မူတည်ပြီး အမှားအမှန်ကွဲပြားသွားကျတာလို့ထင်ပါတယ်…. အခု ၂၀၂၀ မှာ လူတွေက ဟိုးအရင် ခေတ်တွေကထက်စာရင် ပိုပြီးတိုးတက်လာတယ် တစ်နေရာမှတစ်နေရာကို သွားလာရတာပိုလွယ်ကူလာတယ် အစားအသောက်တွေ အမည်စုံအောင် ပိုလုပ်လာနိုင်တယ် Read More